SIDA LOO QAADO BAKAYLE: GURIGA, DUURJOOGTA, BEERTA - XOOLAHA
Qabashada bakaylaha xaalado kala duwan: sida loo sameeyo dabinka gacmahaaga
Khamrigu waa xayawaan aad u jilicsan oo xayawaan ah, xitaa haddii aanay sida ugu dhakhsaha badan u helin qaraabadooda dhow. Taasi waa sababta xayawaan baxsaday ma aha hawl fudud, gaar ahaan haddii ay u baxsatay aag furan: beerta ama beerta khudradda ah. Sidee loo soo celin karaa ajaanibta, iyo hababka la qaban karo ayaa la qaadi karaa - tan ayaa laga sii wadahadli doonaa.
Sidee loo qaadaa bakayle oo ka baxsan gudaha
Badanaa xitaa xayawaan-xayawaan, xitaa urinta xorriyadda, waxay ka baxsan kartaa milkiilaha, oo diidaya inay ku noqdaan qafiska. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ka cararaya milkiilaha, waa habkaas oo kaliya. Si loo helo magangelyo si uu u qabsado qof u ololeynaya inuu guuleysto, waa muhiim in la aqoonsado dhammaan dabeecadaha la maqlo ee muujinaya ujeedadiisa. Calaamadahaasi waxay asal ahaan ka mid yihiin kuwan soo socda:
gooyaha lugaha ee dhulka - bakayle ayaa diyaar u ah inuu ka tago goobta oo uu ordo waqti kasta;
istaag lugaha lugaha iyo dhagaha calaamadaha - xayawaanku wuu dhegeystaa, wuu xiiseynayaa wax;
Ku adkee dusha - Xayawaanku aad ayuu u baqayaa, gaar ahaan haddii uu maqlo dhawaaqyo aan fiicnayn.
Kabtanka ayaa istaagaya lugaha gadaashiisa iyo dhagxaantiisa dhagxaan - mid ka mid ah calaamadaha baxsiga ee ka imanaya kooxda martida ah. Dhammaan sifooyinka habdhaqanka ee liiska, ugu dambeyntii waa mid aad ugu wanaagsan in la qabsado, sababtoo ah mararka qaarkood cabsida aad bay u xoogan tahay taas oo si ba'an u curyaanka xayawaankaaga, isaga oo u diyaarsanaya wakhti ku filan si ay u qabato.
Si habboon in loo habeeyo xannaanada iyo dayactirka xayawaanka la xayawaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la baro dhammaan waxyaabahii taranka taranta ee guriga, sidoo kale waxay ku talinayaan in la helo faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ilaalinta bakaylaha dalka.
Way fiicantahay haddii mulkiiluhu baro xayawaanka si uu uga jawaabo wicitaankiisii ​​hore. Xaaladdan, ma jiri doonto wax dhibaato ah ee qabashada, kaliya wac wata xayawaankaaga iyo u diyaari dhadhan fiican. Tani, xayawaanku waxay si daacad ah uga tagayaan goobta garoonka waxayna ku soo laabtaan qafiska.
Kala soocida xaalada waxaa laga yaabaa in aan lagama maarmo xayawaan xayawaan ah, marka mulkiilaha uunan haysan waqti uu ku ogaado halka uu tagay. Xaaladdan marka hore, marka hore waxaad u baahan tahay inaad kormeerto dhammaan meelaha dillaacsan ee meelaha ku dhow iyo meelo ka baxsan, gaar ahaan aagga meesha ugu dambeysay ee la arko. Sida ugu dhow ee suurtagal ah xayawaanka, waxay u muuqataa si tartiib ah, iyada oo aan dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn, maqaarka maqaarka iyo u qaad jadwalka. Haddii raadinta aan lagu guulaysan guusha, waxaad ka bixi kartaa qafis iskiis ah oo qolka ku yaala oo leh raashin aad u jecel gudaha gudaha: waxa hubaal ah inay geli doonaan sida ugu dhakhsaha badan markay gaajoonayso.
Sida loo qabto bakayle beerta
Haddii aad ku qabsato bakayle guri, way adag tahay, dhammaantood way ku adag tahay beerta khudradda, halkaas oo ay leedahay siyaabo badan oo dib u gurasho ah. Tani waxay si gaar ah u tahay xayawaanka lagu hayo baqashada, taas oo si khaas ah u boodi karto. Mararka qaarkood waxaa dhacda in aad lumiso aragtidaada mudo ah, sidaa daraadeed dhammaan tallaabooyinka waa in lagu sameeyaa habka soo socda:
Qaymee xaaladda iyo go'aaminta meesha hoyga ah ee loo yaqaan 'emigrant earned' (tani waxay noqon kartaa baadiyaha ama cagaarka beerta khudradda, tusaale ahaan, hadhuudh).
Meelaha ay jiraan tiro badan oo wadooyin ah, meelo dabiici ah, habka qallafsan ee loo dhisi doono sida ugu dhow ee suurta gal u ah albaabka (tani waxay u oggolaanaysaa in qafiska loo xoqo sida ugu dhakhsaha badan xayawaanka gudaha).
Waxaad u soo qaadan kartaa bakayleka ciribtirka leh oo la adeegsanayo cunto, waa in lagu dhajiyaa meesha ay jirto raadadka ugu badan ee dabiiciga ah (dabiiciga, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto dawooyinka iyo qafiska laftiisa).
Waxaad ku hubin kartaa dabinka 1-2 jeer maalintii, iyo inta lagu jiro waqtigan inta badan waxaad ku maamuli kartaa inaad soo qabatid guriga guriga. Haddii aan ka hadleyno xayawaanka duurjoogta ah, waxay qaadan doontaa waqti dheeraad ah si ay sidan u qabato; haddii wiigga dhexdiisa dabka ay weli madhan tahay, macnaheedu waa inay u guuri doontaa meel kale. Qaadashada xayawaanka duurjoogta ah ayaa la geeyaa meel aaney awood u lahayn in ay waxyeeleeyaan dalag iyo geedo.
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato sida loo go'aamiyo jinsiga ee bakaylaha, sababta bakaylaha si liidata u koraan oo aan culeysin, iyo waxa saameynaya nolosha ee bakaylaha.
Noocyada Kalluumeysiga Caadiga ah
Si ka duwan sida guriga iyo qurxinta, bakaylaha duurjoogta ah ayaa guud ahaan doorbidaya inuusan qof la qabsan, sidaas darteed way adagtahay in la qabto. Ugu fiican ee ujeedkani:
unugyada isku xira.
Tixgeli mid kasta oo ka mid ah doorashooyinka si aad u soo dhawaato. Qabsii dabka
Si aad u hesho natiijada ugu badan ee isticmaalka xariir, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso dhowr arrimood:
waxaa lagugula talinayaa in aad horey u heshid meel leh dabiiciga dabiiciga ah ama godho gaaban oo ku yaala wadada bakaylaha (waxoogaa yar kadib dabeecadda ayaa loo xirayaa);
haddii caqabadaha noocaas ah aan la heli karin, waxaad yeelan doontaa inaad abuurto caqabado macmal ah, doorka kaas oo si fiican ugu habboon laanta ballaaran ama geed yar oo ka caawinaya inuu abuuro kore (waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la hubiyo in qaybta la doortay ay culus tahay in lagu hayo xayawaanka la qabtay iyo laanta laanta dheer).
Waxay u badan tahay inaad waxtar u leedahay si aad u ogaato waxa la samaynayo haddii bakeylku uu noqdo baruur, iyo sidoo kale akhri sababta sabatada bakayleedka iyo waxa laga yeelayo.
Tallaabooyin dheeraad ah:
Geli jaantuska la doortay ee jidka loo maro dhaqdhaqaaqa caadiga ah si markaa jirku u gudbo si toos ah xarunta dhexe ee roogga (buro yar yar iyo laanta yaryar ee dhinacyada ayaa xayiraya xayawaanka in ay ku gudbaan bartamaha).
Iska ilaali saqafyada yar yar ee ciidda, labada dhinac ee dabin, si looga hortago xayawaanka ka baxsan.
Ku dheji khad yar oo yar oo ka mid ah hal dhammaadka xadhigga naxaasiga ah ama copper, ka dibna ka gudbi dhamaadka bilaashka ah si aad u abuurto nooca lasso ah.
Ku dhaji qaybta sare ee cirifka ah ee cirifka ah ee caanaha la soo xushay, ku duub dhowr jeer hareeraha xooggan oo ku hubso iyada oo si fudud loo xiro si aysan u dhicin.
Under the loop of silig waa faa'iido leh in la dhigo dhowr laamood, sidaa darteed xayawaanka aan hoos u dhigi lahaa hoos.
Daawo: Dareemo degdeg ah oo loogu talagalay bakayle
Ururada dooxooyinka yeygu waa xal kale oo wax ku ool ah dhibaatada haysashada bakaylaha duurjoogta, laakiin waa inay si fiican u qalabeeyaan. Nidaamkani waa mid sahlan, laakiin waxay u baahan tahay dhammaystirka fulinta talaabooyin dhowr ah, iyada oo la tixgelinayo xisaabaadka qaarkood.
Waa muhiim! Marnaba ma dhici karto in buste lagu tuuro xayawaanka ama dhar kale oo mugdi ah - way cabsi gelin doontaa. Waxaa ugu wanaagsan in si tartiib tartiib ah ugu soo dhawaato isaga, iskudubarida iyo xayawaanka xayawaanka leh codka jilicsan.
Guud ahaan, habaynta caleenka ceelka xaaladdan waxay u egtahay sidan:
Dhexdhexaad ee bakaylaha, dig khatarta, oo ku saabsan baaxadda oo u dhiganta xuduudaha lafta laftiisa (dhererka iyo dhererka godadka noocaas ah waa in ka badan 0.5 mitir, iyo qoto dheer - 1 mitir ama wax ka badan).
Dooro dhawr laamood oo khafiif ah, wax yar ka dheer wareega godka godka (waa inay joogaan dusha sare, laakiin aan u adkeysan miisaanka xayawaanka) oo ku faafinaya dabinka.
Iska dhaaf shabaqaha iyo qoryaha yar yar, hayso qaab dhismeedka 3-4 waaxood oo gaaban, iyada oo lagu daro burush yar.
On top of qaabka soo baxay, si tartiib ah u kala firdhaan caleemo gubtay - si aad si buuxda u qarin dabin.
Marka lagu daro caleenta, si tartiib ah laanbaha ugu daadi weelka ka soo ururiya dhulka si aan ceelku u eegin mid cusub.
Waxaad ku dhejin kartaa digaaga godadka cirifkaaga (marka la eego sida ugu dhow ee xaruntii ugu macquulsan) adoo dooranaya karootada, hadhuudh ama khudaar kale ujeedadaas.
Goobta dabka ayaa lagu calaamadeeyn karaa waxyaabo dhalaalaya, sidaas darteed si fudud ayaa loo heli karaa inta lagu jiro baaritaanka joogtada ah.
Video: Bakayle cabsi leh
Baqshadda aad u baahan tahay waxay ka kooban tahay derbiyada mesh, albaabbada, farsamooyinka hoos loo dhigo iyo duubisyada, iyadoo la adeegsanayo waxa uu ka shaqeeyo. Dhamaan waxaad sameysaa waa inaad ku daboosho dabinka meel ku haboon (waxaad ka heli kartaa aagga oo leh xayawaanka ugu badan ee xayawaanka) iyo, inaad qashinka gudaha geliso, sug in bakaylku uu gudaha galo (albaabku wuxuu xiraa miisaanka).
Sida qeybihii hore, noocyo kala duwan oo khudaar iyo rooti ah ayaa u adeegi doona sida digaag fiican, oo ah in si cad loogu dhejiyo xarun farsamooyinka dabiiciga ah, haddii kale xayawaanka ayaa si fudud u qaadan doona qadhaadh iyo inuu baxsado.
Baro sida loo dhiso kafeyn hawo furan iyo qafisasho, sida loo sameeyo baqshadda iyadoo la adeegsanayo habka Zolotukhin, iyo sidoo kale diyaarso iyo guri loogu talagalay laawayaasha gacmahaaga.
Qaadashada dabin noocaas ah ma aha mid adag, sababtoo ah marka lagu daro naqshadda la iibsaday waxaa had iyo jeer ah cashar cad, oo isticmaaluhu wuxuu kaliya u baahan yahay inuu hubiyo adeegga adeegsiga. Marka la eego unugyada isweydaarsiga ah waa ugu yaraan hal mar maalintii, iyo sida ugu dhakhsaha badan oo aad u hesho xayawaan, waxaad u gudbin kartaa meel kale si aad u sii dayso xorriyadda ka fog gurigaaga. Nidaamka noocan oo kale ah waa in si xaqiiqo ah loo tixgeliyaa bini-aadamnimada ugu badan ee dhammaan soo bandhigay, maadaama xayawaanku aaney dhaawac u geysan, cuntaduna ka hartay waxay ku filnaan doontaa waqtiga oo dhan (inta u dhaxaysa jeegaga maalin).
Ma taqaanaa? Bakeyaha duurjoogta ah wuxuu gaari karaa ilaa 55 km / h, in kastoo aanay weli gaarin tusmooyinka cagaaraha. Dhamaadka, haddii loo baahdo, waxay u gudbi kartaa xawaare qiyaastii 70 km / h.
Qaadashada bakaylaha leh sanduuqa kartoonka ma aha midka ugu kalsoonaan karo, laakiin doorshada ugu jaban, taas oo u baahan dadaal yar oo ka imanaya ugaadhsiga. Xaaladdan oo kale, hannaanka oo dhan wuxuu u egyahay sidan:
Hel sanduuqa kartoonka, dhererka kaas oo noqon doona wax aan ka badnayn 1 mitir, hoosna jar.
Podyschite laanta iftiin yar, dhererka qiyaastii 120 cm oo isku xir dhameerka xiga ama xiga kale.
Samee laba god oo sanduuqa ku jira, u dhaaf xariiqda iyaga oo maraya isku xirkooda.
Qeybta lakabka ee sanduuqa ku hayn doonta, xidh dhambiska dharka dhererkiisu yahay 4 cm oo dheer kuna xir xadhig, sanduuqa dhererka qiyaas ahaan 1 m.
Qeybta sare ee sanduuqa, ku samee laba god oo dheeraad ah.
Ku dhaaf xarigga iyaga oo maraya, kadibna hal dhamaadka ilaa dhexe ee xadhig, sameyska loop. Qeybta kalena waa inay hoos u dhigtaa 10 cm.
Xidho karootada waaweyn. Sida ugu dhakhsaha badan xayawaanku wuxuu ku boodaa oo cunaa raashinka, soo jiidashada iyo sanduuqa hoos u riixa, dhoobada dhuuban ee dhuuban ayaa jaban oo waxay noqon doontaa sanduuqa.
Si aad isku daydo inaad u qaaddo xayawaanka si ay u guuleystaan, mid kasta oo ka mid ah kiisaska la tixgelinayo waxaa muhiim ah in la xusuusto xeerar asaasi ah:
Markasta u xaji xayawaanka si tartiib ah oo degan, iyada oo aan dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn.
Markaad qabanqaabinayso qadadka, isku day inaadan cuntada la qabsan gacmahaaga, sababtoo ah haddii xayawaanku u arko qof si fiican u caansan, waxaa laga yaabaa inaanay u tagin dabin. Isla sidaas oo kale waxay ku habboon tahay isbedellada unugyada dheeraad ah.
Haddii uu xayawaanku kaa baxsado, waxa fiican inaad samaysatid qalimaan daboolan ee qabashada, xulashada meelaha ay ka kooban yihiin dhowr dhinac ama isticmaalka dayrarka shinbiraha shimbiraha.
Xaaladda ba'an, haddii aysan suurtogal ahayn in xayawaanku keligood ku qabsado, waxaad caawimaad ka raadsan kartaa xirfadlayaasha leh qalab haboon.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira dhowr talooyin oo kala duwan oo loogu talagalay kuwa isku dayaya in ay qabtaan xayawaan duur joog ah. Tusaale ahaan, haddii aad doonaysid inaad diyaarisid cunsurin, dhammaan nadaafadda dhammaadka waa in lagu sameeyaa oo keliya gacmo-galis, iska ilaalinta xiriirinta dhiigga iyo xubnaha jirka ee bakaylaha (gaar ahaan haddii ay jiraan xakameyn iyo nabaro gacmaha).
Waxaan kugula talineynaa in aad naftaada u baratid faa iidada iyo khasaarooyinka ilaalinta bakaylaha.
Guud ahaan, si aad uhesho dharka lagu xiray qalab kasta oo la heli karo, oo ay ku jiraan xaashida iyo sanduuqyada kartoonada. Si kastaba ha ahaatee - haddii aad rabto inaad badbaadiso nolosha xayawaanka, waxaa wanaagsan in aad wax kasta si taxadar leh u sameyso oo aadan ka cabsi qabin, ku tiirsanaanta haqab-beelka, iyo inaadan awood ku lahayn.
Sidaad u qabsan lahayd bakteeriyada Mid ka mid ah fursadaha shaqo ee noocan oo kale ah waa inaad u baahan tahay inaad soo qaadato bakaylahaaga meel aad u haboon si aad u qabsato. Keen feederaha raashinka uu ugu jecel yahay kadibna marka uu yimaado xayndaabku wuxuu ku shubayaa shabaqa. Waxaad isticmaali kartaa kaluumeysiga caadiga ah ee hoosta ku yaal. Tani waa hab aad loo aqbali karo oo aan mar uun lagu badbaadin kiiska.